Wasiir ka tirsan Germalka oo diiday Qaadashada talaalka AstraZeneca Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaWasiir ka tirsan Germalka oo diiday Qaadashada talaalka AstraZeneca
Wasiir ka tirsan Germalka oo diiday Qaadashada talaalka AstraZeneca
April 2, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Caalamka 0
Jarmalka ayaa dib u bilaabay isticmaalka talaalka AstraZeneca coronavirus ee dadka waayeelka ah. Laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Horst Seehofer ayaa diiday inuu qaato tallaalka.
wasiirka ayaa diiday codsiga wasiirka caafimaadka Jens Spahn, oo horaantii toddobaadkan ka codsaday dhammaan xubnaha dawladda ee ka weyn da’da 60 jir inay qaataan tallaalka, sida uu qoray wargayska Bild.
Jawaabta codsigii Jens Spahn waa: Maya, ”ayuu Seehofer u sheegay wargeyska.
Jarmalka ayaa kamid ah wadamada dib u bilaabay isticmaalka talaalka AstraZeneca. Talaalka lama siinayo dadka kayar 60 sano.